7 Matekiniki Ekusimudzira Zvemukati Zvekugadzirwa | Martech Zone
7 Matekiniki Ekusimudzira Yako Yemukati Zvisikwa
China, January 29, 2015 China, April 30, 2015 Jenn Lisak Golding
NeChipiri, takave neinonakidza webinar nemumwe wevatinoshamwaridzana navo, Mazwi ekushambadzira, on 10 Zvemukati Zvekugadzira Matekiniki eIpo Tsime Rinomhanyisa. Pataitandara tichiita majee uye tichiita madiki madiki kuseri kwezviitiko, paive nekumwe kujeka kukuru kwakagovaniswa pawebhusaiti.
Heano manomwe makiyi ekutora kubva kune edu ehupenyu zvisikwa matekiniki webinar:
Seta nguva padivi peiyo nzira yekugadzira - Kunyangwe zvinganzwika sezviri nyore, vanhu vazhinji havagadziri nguva parutivi yechizvarwa chemusoro wenyaya; vanoisa nguva padivi yekuitisa zvemukati. Ronga imwe nguva yekufunga kana kuburitsa mazano matsva, uye kubvisa izvo zvinokanganisa. Inoenderana stat:
"Paavhareji, vashandi vanoshandisa anopfuura makumi mashanu muzana ezuva ravo rekushanda vachigamuchira nekugadzirisa ruzivo pane kurushandisa kuita mabasa avo." (Kunobva: LexisNexis)
2. Chengeta kabhuku kekunyorera pedyo - Kunyangwe zvakanaka kusendeka nguva yekugadzira, kune vamwe vanhu (seni!), Majusi ekugadzira haamire kuyerera. Ini ndaigona kuuya nepfungwa yakanaka chaizvo pandinenge ndichinyanya kuona Scandal paNetflix, kana ini ndiri kumitambo yekurovedza muviri. Kuchengeta notepad padhuze kuchakurudzira iwe kunyora pasi ako mazano uye wozvichengetera zvemberi.
3. Iva nemitambo yekota uye yemwedzi - Patakatanga kukurudzira vatengi vedu kuti vaite izvi, isu takanyatsoona masosi enjini yekutsvaga achikwira kune vatengi vakanamatira kune izvi rinotevera gore kupfuura avo vasina. Iyi inzira yakanaka yekugadzirisa mishandirapamwe yematanho zvakare; kana iwe uine akati wandei misoro iwe yaunogona kutarisa pairi, ipapo unogona kudzoreredza zvemukati mune akasiyana masvikiro, senge infographic, chena mapepa, mavhidhiyo, nezvimwe, kuitira kuti pakupedzisira zviite kuti iwe basa rive nyore. Inoenderana stat:
"84% yevatengesi vanoti havabatsiri pakutengesa zvemukati vakati havana zano rakanyorwa." (Kunobva: Content Marketing Institute)
4. Inbox yako ndeimwe yezvinhu zvako zvakanaka - Kana iwe uchida mamwe mazano matsva ezve zvemukati, tarisa yako email inbox. Wakave nemutengi akakubvunza iwe mubvunzo urikubvunzwa nevamwe vanhu? Dzokorora mhinduro yako kuti ushandise kushambadzira zvemukati. Wakave nekuita hurukuro inonakidza nemumwe wako nezve zvauri kuita? Taura nezvazvo pane yako blog. Tarisa kune ako kutaurirana kuburikidza neemail uye ona kuti ungaishandisa sei mukambani yako yezvinyorwa kushambadzira.
5. Paunenge usina chokwadi, nyora pasi - Zvinoenderana nekumwe kutsvagurudza kwakaitwa neWesmithmith kweKushambadzira, inonyora zvinyorwa pamusoro peanopfuura gumi muzana ezvinyorwa zvese zviri muInbound.org "Nguva Yese" Top 10 zvataurwa. (Ona zvandakaita neichi posvo?) Vanhu vanoda manhamba, uye inopa vanhu chivimbiso saka ivo vanoziva zvimwe zvavanozowana pavanobaya.
6. Hauna nguva yekunyora? Hira ghostinterviewer / munyori - Regai nditsanangure. Ini ndashanda netoni yeECOs uye maCMOs ane ruzivo rwakajeka mumaindasitiri avo, asi ivo havana nguva yekunyora chete. Kuti tirwisane neizvi, isu takatumira mweya vanyori vanonyatsotora awa vhiki yega yega kuti vabvunze maECOs penyaya, vobva vanyorera mablog kana zvinyorwa kubva mumaonero emukuru. Iyo yakanaka nzira yekufunga hutungamiriri kunze uko uchichengetedza nguva nemari.
7. Zvakakomba, rega kutya kuburitswa kunze - Kwenguva yakareba, kuburitsa zvirimo yaive poindi yekukakavara kune vanhu vazhinji vataitaura navo, asi isu tanga tiri mutsigiri wekuburitsa kubvira zuva 1. IZVOZVI, mumwe munhu asati andideedzera kwandiri mune zvakataurwa, rega nditsanangure. Kunyangwe tikaburitsa kutsvagisa kana zvemukati, tinobata yega yega yezvinyorwa zvisati zvabuda kuenda kune vatengi kana kunze kwenyika. Ndichiri kuvaka zano, ini ndichiri kuita kutsvagisa mazwi, ini ndichiri kugadzirisa izwi uye ini ndichiri kudzora kunaka kwechikamu chemukati chichava. Inoenderana stat:
"Makambani makumi matanhatu nenomwe kubva muzana anoshandisa kushambadzira kwavo - kubva pa62% muna7." (Kunobva: Mashable)
Kuti uverenge nezve ese maitiro, tarisa iyo yakazara webinar pano:
Kana uine mamwe matipi ekuwedzera, ndapota ita saizvozvo mune zvakataurwa!
Tags: zvakasikwa zvemukatiContent Marketingkugadzira zvirimopfungwamazano ekunyorazvekunyorakunyora
Yako 2015 Yemukati Yekushambadzira Strategiki Inovhara Aya Maitiro
Infegy Atlas: Akangwara Mhinduro kubva kuSocial Media
Jan 31, 2015 pa 10: 47 AM
Zano rakakura iro munhu wese anofanira kuisa mukugadzirira yako webinar.